Indlu encinci ethandekayo enegadi - I-Airbnb
Indlu encinci ethandekayo enegadi
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguGian Luca
UGian Luca yi-Superhost
Molweni nonke, nguGian Luca olapha enceda oomakazi bam abangazolileyo babasebenzisi be-intanethi ukuba baqashe le flethi itofotofo kumbindi weVillasimius, 15 min. ukuhamba ukusuka kumalwandle amangalisayo. masibone ukuba unethamsanqa kwaye ufumane izifundo zokupheka zesardinian;)
Uya kuba nakho (akwabelwanga nabani na): igumbi lokulala eli-1, ibhafu eyi-1, ikhitshi eli-1 kunye negumbi lokuhlala eli-1. Uza kwabelana ngegadi kunye nendawo yokupaka kunye nosapho lwam oluya kuhlala kwezinye iindawo zendlu.
4.88 · Izimvo eziyi-195
Ukweyona ndawo iselunxwemeni yeSiqithi, eneelwandle ezininzi ezahlukeneyo ezigxile kwindawo ethintelweyo, ipaki yaselwandle ekhuselweyo elungele uhambo kunye ne-snorkeling, ulonwabo kunye nobomi basebusuku obunomdla ngoJulayi nango-Agasti ubukhulu becala. Azikho iindawo zokutyela ezininzi ezijikelezayo...kuphela ukutya okuyinyani!
Umbuki zindwendwe ngu- Gian Luca
Kumba wokubuyisana wemfihlo kunjalo, kuwo nawuphi na umbuzo sikhona ukunceda ukuwenza.